Global Voices teny Malagasy » Global Voices ao amin’ny Radio Open Source (2005) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Septambra 2019 3:00 GMT 1	 · Mpanoratra Rebecca MacKinnon Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Nanolotra manontolo ny fandaharany faharoa  ny Zoma ho an'ny Global Voices ny Radio Open Source , fandaharana vaovao amin'ny onjam-peo ho an'ny daholobe natolotr'i Chris Lydon avy any Cambridge, Massachusetts. Nahitana ny resadresaka tamin'ny finday niaraka tamin'ireo bilaogera Hossein Derakhshan  (Hoder), Ndesanjo Macha , Dina Mehta , Steve McDermott , ary ny mpiara-manorina ny Global Voices Ethan Zuckerman , niaraka tamiko  nipetraka tao amin'ny studio ny fandaharana.
Tsindrio eto , mihainoa, ary ampahafantaro anay izay eritreritrareo. Nieritreritra izaho sy Ethan raha tokony hiezaka hanatontosa rakipeo Global Voices tsy tapaka isika.
Izay mitondra antsika mankany amin'ny lafin-javatra hafa. Miasa amin'ny fanangonan-dahatsoratra  bilaogy isika amin'izao fotoana izao… saingy tena tsy maintsy tokony manao fanangonana rakipeo isika – ary mety ho avy ihany koa ny fanangonana lahatsary – avy amin'izao tontolo izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/09/09/142075/
 fandaharany faharoa: http://www.radioopensource.org/pilot-2-gee-whiz-arent-these-japanese-strange/
 Hossein Derakhshan: http://www.hoder.com/weblog/
 Steve McDermott: http://singabloodypore.blogspot.com/